Xaaska madaxweynaha Lesotho oo loo haysto dilka xaaskii hore ee madaxweynaha. - NorSom News
Xaaska madaxweynaha Lesotho oo loo haysto dilka xaaskii hore ee madaxweynaha.
Marwada koobaad ee dalka Lesotho ayaa loo haystaa dilka xaaskii hore ee ra’iisal wasaaraha waddankaasi Thomas Thabane.
Booliska dalkaasi ayaa xaqiijiyay in marwadaasi maanta oo Arbaco ah la soo taagi doono maxkamadda sare ee Lesotho.
Haweeneydan oo muddo bil ah dhuumaalaysi ku jirtay ayaa isu soo dhiibtay booliska caasimadda Maseru si ay su’aallo u weydiiyaan.
Marwada koobaad oo lagu magacaabo Maesiah Thabane ayaa xalay ku bariday xabsiga, kadib markii shalay oo dhan su’aalo la weydiinayay dilka xaaskii hore ee seygeeda ahna ra’iisal wasaaraha Lesotho.
Taliyaha booliska ee dalkaasi Holomo Molibeli ayaa BBC-da u xaqiijiyay in Mrs Thabane maanta la horgeyn doono maxkamada sare iyadoo si rasmi ah loogu soo oogi doono dilkaasi dhacay 2017.
Lipolelo Thabane oo ay si adag isu hayeen seygeedii hore Thomas Thabane ayaa lagu toogtay meel u dhaw gurigeeda oo ku yaalla afaafka hore ee caasimadda, laba maalin uun ka hor inta aan ra’iisal wasaaraha xilka loo dhaarin.
Wararka ku aaddan ku lug lahaanshaha marwada koobaad ee dilkaasi ayaa waxaa aad uga hadlay warbaahinta Lesotho, waxaana ay arinta sii adkaatay markii ay haweeneydaasi ka baxsatay dalka.
Dilkaasi ayaa sidoo kale waxbadan u dhimay sumcadda ra’iisal wasaaraha.
Ma cadda in marwada koobaad ay maxkamadda ka codsan doonto in damaanad lagu sii daayo, balse booliska ayaa sheegay inay maxkamadda ka codsan doonaan in aan la sii deyn.
Previous articleXeer ilaaliyaha guud ee Norway oo diiday inuu dib u furo xukuno qaldan oo qoxootiga laga gaaray.
Next articleSweden: Gawaari gaashaaman oo laga xaday xero ciidan!.